Stephen Hawking-5 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← Stephen Hawking -4
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ အပိုင်း(၂၃) →
Posted on July 14, 2010 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း -5
အိုင်းစတိုင်းသည် ကျော်ကြားသော E=MC2 ပုံသေနည်းကို ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ “E” သည် “Energy” ဖြစ်၍၊ “M” သည် “Mass” ဖြစ်ပြီး၊ “C” သည် “Speed of Light” ဖြစ်သည်။ ထို ဥပဒေသ၌ အလင်း၏ အလျှင်ထက် မည်သည့်အရာမှ ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ မသွားနိုင်ရ ဟူ၍ ကန့်သတ် သတ်မှတ်သည်။ အားနှင့်ဒြပ် ညီသောအခါ – အားကြီးရန်လိုတိုင်း ဒြပ်ကြီးရမည် ဖြစ်သည်။
အိုင်းစတိုင်းသည် အစဉ်အလာ၏ ပြီးပြည့်စုံသော တရားသေ အချိန်ကြီးအား ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အချိန်နှင့် နေရာ၏ အဓိပ္ပာယ်အသစ် ဖွင့်ဆိုချက်များကို ဖွင့်ဆိုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အချိန်နှင့် နေရာတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော ထာဝရ တရားသေ သတ်မှတ်ခံထားရသော အရာများ မဟုတ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အချိန်နှင့် နေရာ ဆက်စပ်ပုံကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
နေရောင်သည် နေမှကမ္ဘာသို့ ဖြတ်လာရချိန် အချိန် (၈) မိနစ်ကြာသည်။ အချို့သော ကြယ်စုများသည် လွန်စွာဝေးသဖြင့် အလင်းများသည် ကမ္ဘာသို့ မရောက်နိုင်လောက်အောင် ကြန့်ကြာရသည်။ အချိန်နှင့် နေရာသည် အပြားမဟုတ်၊ အကွေးဟု တင်ပြခဲ့သည်။ အချိန်နှင့် နေရာသည် အရာဝတ္ထုကို သက်ရောက်စေရုံမျှမက အရာဝတ္ထုများ၏ သက်ရောက်မှုများကိုလည်း အချိန်နှင့် နေရာက ခံယူရသည်ဟု ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
အိုင်းစတိုင်း၏ အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီမှ ဟော့ကင်းနှင့် ပန်ရိုစ့် တို့သည် စကြ၀ဠာ၏ အစကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ အိုင်းစတိုင်း၏ အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီသာ မှန်ခဲ့လျှင် ဤစကြ၀ဠာသည် အစရှိရလိမ့်မည်ဟု ဟော့ကင်းက ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကို ဟော့ကင်း၏ ဒုတိယ အခန်းဖြစ်သော Space and Time ၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် စကြ၀ဠာကြီးသည် ပြန့်ကားကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ စကြ၀ဠာကြီးသည် ကျယ်ပြန့်နေသည်ဟု တွေ့ရှိရချက်သည် ထူခြားကြီးမားလှသော အောင်မြင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ဟော့ကင်းသည် ဤသို့ရေးခဲ့သည် . . .
… The discovery that the universe is expanding was one of the great intellectual revolution of the 20th century. … ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ဆွဲအားရှိလေရာ တစ်စက္ကန့်လျှင် (၇)မိုင် အထက် ပြေးသွားနိုင်မှသာလျှင် ကမ္ဘာမြေကြီးမှ ထွက်ခွာ သွားနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ထို့ထက် နှေးကွေးပါက ကမ္ဘာမြေကြီးက ပြန်လည်၍ စွဲပေလိမ့်မည်။
ကာလနှင့် ဌာနသည် အကန့်အသတ် ရှိနိုင်သော်ငြားလည်း အဆုံးစွန်နယ်ပယ်များ မရှိနိုင်ပါဟု ယူဆနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
စကြ၀ဠာကြီးကို တစ်ပတ် ပတ်ချင်ပါသည်ဟု ပြောသူတို့သည် လက်တွေ့အားဖြင့် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း – တစ်ပတ် ပတ်ရန်ကြိုးစား နေဆဲမှာပင် စကြ၀ဠာကြီးသည် ပျက်စီးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ စကြ၀ဠာကြီးသည် ထာဝရ ရှေ့ဆက်လက်၍ ကျယ်ပြန့်နိုင်ကောင်း ကျယ်ပြန့် နိုင်ပေလိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြနိုင်သော သာဓကများတွေ့ရကြောင်း ရှင်းခဲ့သည်။
စကြ၀ဠာထဲ၌ Dark Matter ခေါ် တိုက်ရိုက်မြင်တွေ့ခြင်းငှာ မအပ်သော ဒြပ်များရှိရာ၊ ၄င်းတို့ကို တိုက်ရိုက်အားဖြင့် လက်တွေ့ စမ်းသပ်၍ မရချေ။ စကြ၀ဠာအစ၏ ဟိုမှာဘက်တွင် အားလုံး ချုပ်ဆုံးအပ်သော Singularity ခေါ် အမှတ်ထူး ရှိကြောင်း အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီက ဖော်ပြသည်။ သို့သော် အရာရာ ချုပ်ငြိမ်းနေလျှင် စကြ၀ဠာကြီးအား မည်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည် ဟူသော သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဥပဒေသသည်လည်း ချုပ်ဆုံးသွားရမည် ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီသည် စကြ၀ဠာ၏ အရင်းအမြစ်ကို ဖော်ပြရာ၌ အခက်အခဲ ဖြစ်နေသည်။ သဘာဝ ဥပဒေသသည် အမြဲတမ်းရှိရမည် ဖြစ်ရာ စကြ၀ဠာ မပေါ်ပေါက်ခင်က သဘာဝဥပဒေ မရှိပါဟူသော အယူအဆကို သိပံ္ပပညာရှင် တော်တော်များများက လက်မခံနိုင်အောင် ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီအရ စကြ၀ဠာအစ၏ ဟိုမှာဘက်တွင် မည်သည့်အရာမှ မရှိ ဘိတ်ဘိတ်တုံးနိဂုံး အမှတ်ထူးကြီးရှိသည်ဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြရာ ရောက်နေသည်။
ဟော့ကင်းသည် ALS ရောဂါကြောင့် တစ်နှစ် နှစ်နှစ်အတွင်း သေဖွယ်ရာရှိသည်ဟု ကြိုတင်သိထားရာမှ ရောဂါသည် ထင်သလောက် မဆိုးသဖြင့် သူသည် ဤသို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
…. In order to get married I neededajob and in order to getajob I neededaPh.D. ဟု ယူဆကာ Ph.D ကို ရအောင် ကြိုးစားခဲ့သည်။
အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီ မှန်ကန်ပါလျှင် စကြ၀ဠာအစ၏ မဟာပေါက်ကွဲမှု မတိုင်မီ အမှတ်ထူးရှိရမည်ဟု ဟော့ကင်းတို့ တွက်ချက်ခဲ့သည်။ သချာင်္နည်းအားဖြင့် တွက်ချက်ခဲ့သဖြင့် မည်သူမှ သဘာဝကျစွာ ငြင်းချက် မထုတ်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
… There must have beenaBig Bang singularity provided only that general relativity is correct. … ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီသည် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာရပ်များနှင့် ညှိနှိုင်းရန် အခက်အခဲ ဖြစ်သောကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော သီအိုရီတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်အောင် ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် နှိုင်းရသီအိုရီနှင့် ကွမ်တမ်သီအိုရီတို့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းနိုင်ရန် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း – သိပ္ပံခရီးဆက်ရန်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ၄င်းကို ဟော့ကင်း ရေးသားသော A Brief History of Time စာအုပ် Expanding Universe အခန်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
M.A, PhD (Philosophy in Religious Sciences) LONDON.
This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်. Bookmark the permalink.